कसरी पत्याउनु प्रचण्डको सम्पत्ति ?
Sat, Apr 21, 2018 | 03:41:49 NST
14:41 PM ( 1 year ago )
Total Views: 15.6 K
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्पत्तिको नाममा तीनतोला सुन र एक कठ्ठा जमिन मात्र, त्यो पनि पैत्रिक रे ! भन्ने थाहा पाउँदा सबैलाई अचम्म लागेको छ । उहाँको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै धेरैले यो अस्वभाविक भन्दै शंका गरेका छन् । फेसबुक र ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिलाई लिएर धेरैथरी टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भैरहेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसँग यति मात्रै सम्पत्ति भएको र कसैलाई थाहा छ भने देखाउन चुनौति दिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीसँग तीनतोला सुन र एक कठ्ठा जमिन मात्रै भएको कुरा चाहिँ सजिलै पत्याउन मुश्किल छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले झारा टार्ने हिसाबले मात्र सम्पत्ति विवरण फारम भरेको देखिन्छ । फारममा भएका अरु धेरै विवरणमा उहाँले केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । अरु मन्त्रीहरुले आफूसँग भएको मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरको विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले झारा टार्ने हिसाबले मात्र फारम भर्नुभएको छ ।
एकछिनलाई मानौं, उहाँको घर पनि छैन, गाडी पनि छैन, जग्गाजमिन पनि छैन । तर गोजीमा मोबाइल त बोकेर हिँड्नुहुन्छ । हातमा महंगो घडी देखिन्छ । लाजिम्पाटको भव्य महलमा बस्नुहुन्छ । उहाँले अपत्यारोले ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर माओवादीकै नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
उहाँले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग भएको मोबाइल खै देखाएको ? सबैभन्दा गरिब भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त आफूसँग भएको मोबाइल समेत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोकेर हिँड्ने मोबाइल उहाँको होइन ? अनि उहाँसित ल्यापटप र कम्प्युटर पनि छैन ?
पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म उहाँ सभासद र सांसद मात्र होइन, दुईपटक त प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएको मान्छे । मासिक रुपमा पारिश्रमिक एवं तलब भत्ताबाट आर्जन हुने सम्पत्ति कहाँ गयो ? सबै पार्टीमा बुझाउनुभएको त होइन होला नि ?
प्रधानमन्त्री र उहाँको परिवारलाई बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सम्पत्तिको नाममा तीनतोला सुन र एक कट्ठा जग्गा मात्रै भएको गरीब मान्छे भनेर कसैगरी पनि देखिंदैन । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया हेरेरै थाहा हुन्छ, उहाँ यतिधेरै गरीब हुनुहुन्छ भनेर कसैले पनि पत्याएको छैन । र उहाँ यति थोरै मात्र सम्पत्ति भएको नेता हुँदै होइन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पत्ति विवरण